टप फाईभ ट्रेण्डिङ्गमा छैन नेपालि : सिनेमा हल संगै युट्युबमा पनि हिन्दीकै हैकम - www.dthreeonline.com
टप फाईभ ट्रेण्डिङ्गमा छैन नेपालि : सिनेमा हल संगै युट्युबमा पनि हिन्दीकै हैकम
- रमेश पौडेल
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १५, २०७६ समय: १८:५९:१०
ईटहरी/ अहिले हामीलाई गित फिल्म, म्युजिक भिडियो हेर्नलाई युट्युव एकदम सजिलो भएको छ । यहि युट्युवले गर्दा पनि कतिपय कलाकारहरुलाई चर्चामा ल्याएको छ । फिल्महरुले पनि हलमा भन्दा राम्रो दर्शक युट्युवमा कमाउन थालेको छ । युट्युवमा ट्रेण्डिङ्गमा पनि आफ्नो देशको गित म्युजिक भिडियो, र फिल्म आउने गर्छ । थोरै समयमा धेरै पटक हेरीएको युट्युवको भिडियो, गित र फिल्म ट्रेण्डिङ्गमा पर्ने गर्छ । त्यसबाट थाहा हुन्छ कुन भिडियोले कति चर्चा पाएको छ भनेर । अहिले नेपाली ट्रेण्डिङ्गमा १ देखि ५ सम्म हिन्दि भिडियो मात्र देखिन्छ । अहिले हाम्रो नेपाली युट्युव ट्रेण्डिङ्गमा त नेपालि भन्दा पनि हिन्दि गित फिल्म र ट्रेलरहरु नै धेरै जसो पर्ने गरेको देखिन्छ ।
हामिले यो समाचार बनाउदा सम्ममा १ देखि ५ युट्युवको नेपाली ट्रेण्डिङ्गमा हिन्दि २ वटा ट्रेलर र ३ वटा फिल्म परेको छ । पहिलो ट्रेण्डिङ्गमा दिस वार हिन्दि फिल्मको ट्रेलर रहेको छ । त्यसको भिभर्स करिब ५ करोड भन्दा बढि रहेको छ । यसलाई मनपराएर १२ लाख भन्दा बढिले लाईक गरेका छन् भने ४२ हजारले मननपराएर डिसलाईक गरेका छन् । ७६ हजार भन्दा बढिले कमेन्ट गरेका छन् । दोस्रो ट्रेण्डिङ्गमा तेरी मेरी बोलको गित रहेको छ । त्यसको भिभर्स ४ करोड ७३ लाख भन्दा बढि रहेको छ । ८ सय ३५ हजार भन्दा बढिले मन पराएर लाईक गरेका छन् भने ४५ हजार भन्दा बढिले मन नपराएर डिस लाईक गरेका छन् । २३ हजार भन्दा बढिले कमेन्ट गरेका छन् ।
तेस्तै तेश्रो ट्रेण्डिङ्गमा जख्मी रोमीयो रहेको छ । यसलाई १ करोड पटक भन्दा बढि हेरीएको छ भने यसलाई मनपराएर एक सय १३ हजारले भन्दा बढिले लाईक गरेका छन् र ८ हजार भन्दा बढिले मननपराएर डिस लाईक गरेका छन् । ३ हजार भन्दा बढिले कमेन्ट गरेका छन् ।
तेस्तै चौथो ट्रेण्डिङ्गमा मोहोनी हिन्दि फिल्म रहेको छ । यो फिल्म करिब १ करोड पटक हेरीएको छ । यसलाई मनपराएर ८१ हजार भन्दा बढिले लाईक गरेका छन् भने ९ हजार भन्दा बढिले मननपराएर डिस लाईक गरेका छन् । २ हजार भन्दा बढिले कमेन्ट गरिएका छन् । आर्को पाचौँ ट्रेण्डिङ्गमा रहेको छ हिन्दि फिल्म भर्दी का धुम रहेको छ । यो फिल्म एक करोड ६० लाख भन्दा बढि पटक हेरीएको छ भने एक सय ९० हजार जानाले मन पराएर लाईक गरेका छन् र १२ हजार भन्दा बढिले मननपराएर डिस लाईक गरेका छन् । ९ हजार भन्दा बढिले कमेन्ट गरेका छन् ।
अहिले पछिलो समय नेपाली फिल्मले भन्दा बढि हिन्दि फिल्म हिन्दि गितमा नै नेपाली आकर्षण भैरहेका छन् । फिल्महरुको हलको बजारको कुरा गर्ने हो भने पनि हलहरुमा पनि नेपाली भन्दा हिन्दि फिल्म नै बढि चलेको हिन्दि फिल्मले नै बढि कमाएको देख्न सकिन्छ । नेपाली फिल्म किन चलीरको छैन् । यसरि नै हिन्दि फिल्मले र हिन्दि भिडियोले नैै नेपाली बजार लिने हो भने नेपाली फिल्मको र नेपाली गित संगितको बजार के होला ? के नेपाली फिल्म, नेपाली गित, संगित नराम्रो नै भएको कारण नचलेको हो त ? नेपाली फिल्म कम्पनीले जहिले घाटा मात्र व्यहोर्नु पर्ने ? के नेपाली फिल्म, गित, संगितमा लगानि कम भएर त नचलेको होईन ? अब यसमा पनि सरोकारवालाले चासो दिनु पर्ने देखिएको छ ।
एजेन्सी/ सिंगिंग रियालिटी शो इन्डियन आइडलको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा एक प्रतियोगीले जज नेहा कक्कडलाई चुम्बन गरि...